Dalxus Media Group » XASAASI DHAGEYSO: Farmaajo iyo Kheyre oo ay ka dhax tafatay & Gudoomiye Mursal oo bilaabay Qorshe lagu…..Dalxus Media Group
XASAASI DHAGEYSO: Farmaajo iyo Kheyre oo ay ka dhax tafatay & Gudoomiye Mursal oo bilaabay Qorshe lagu…..
Jul 5, 2018 - jawaab
Guddoomiyaha Gollaha Shacabka Mudane Maxamed Mursal Sheikh C/raxmaan ayaa ku mashuulsan sidii uu ugu guuleysan lahaa xalinta khilaaf ka dhex taagan Madaxweynaha Soomaaliya Mudane Maxamed C/llaahi Farmaajo iyo Ra’iisal wasaaraha Soomaaliya Mudane Xasan Cali Kheyre.
Khilaafka Labadan Mas’uul ee ugu sareysa dalka ayaa salka ku hayo hardanka Imaaraadka Carabta iyo Qadar ugu jiraan midba helista kheyraadka dalka Soomaaliya iyo waliba sida loo maareynayo Go’aankii laga qaatay Xiisadii Khaliijka.
Mudane Maxamed C/llaahi Farmaajo iyo Xasan Cali Kheyre ayaa la kala saftay Imaaraadka Carabta iyo Dowladda Qadar,kuwaasi oo midba dhinac ku wato Dowlad gaar ah.
Illo ku dhow Guddoomiyaha Golaha Shacabka ayaa inoo shalay in shalay Maxamed Mursal Sheikh C/raxmaan uu shir saacado badan Xafiiskiisa kula yeeshay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo,isagoona ka dhaa dhicinayay in khilaafka kala dhaxeeyo Xasan Cali Keyre si hoose lagu dhammeeyo.
CODKA HALKAAN KA DHAGEYSO
Ra’iisal wasaaraha Soomaaliya Mudane Xasan Cali Kheyre ayaa sida wararka aan ku heleyno wuxuu la safan yahay Dowladda Qadar oo dooneysa iney maalgashi ku sameysato Dekadaha qaar ee ku yaalo Muqdisho halka madaxweyne Farmaajo uu doonayo in dib loo soo celiyo xiriirka Imaaraadka Carabta iyo Soomaaliya.
Wafdi ka socda Dowladda Qadar ayaa Soomaaliya u yimid iney maalgashi ku sameystaan Dekadaha dalka,kuwaasi oo Muqdisho kulla kulmay Ra’iisal wasaaraha Soomaaliya.